Akụkọ kacha ọhụrụ banyere Federal College of Agriculture si Nigeria & ụwa | TAA
Onye edemede na-agba ndị nne na nna ume ka ha kwado ọrụ ụmụaka
Ndị na-atụ anya na anụ ụlọ na-egbu mmadụ asaa na chọọchị ndị ọzọ na Benue
Ụmụaka 13 na-anwụ mgbe ụgbọ okporo ígwè rụsịrị ụlọ akwụkwọ
IGP Ibrahim Idris na-agbaso nzuko omeeti, na-esote President Buhari na Bauchi
English FA nyere £ 800 nde iji ree Stadium Wembley
Ndị uweojii na-agwa ndị Fans Fans ka ha ghara ịga Rome n'enweghị tiketi
Home Tags Federal College of Agriculture
Dino Melaye, ụlọ ọrụ ndị ọzọ maka okike nke mahadum dị na ala Okun
Kọmitii Na-ahụ Maka Ọchịchị Mba, NUC, mere ka Monday mara na n'ime afọ ise gara aga, ihe dị ka nde mmadụ iri isii na ndebanye na mahadum na Naijiria ekweghị nabata.
Senator Oduah na-ebupụta ntọala na ngwụsị ncheta nwa
Senator na-anọchite anya Anambra North na National Assembly, Senator Stella Oduah akwalitewo MAXLIFE Foundation maka ịsọpụrụ nwa ya nwoke nwatakịrị, Omabuwa Maxwell Oduah.
Ọrụ ugbo: Ogologo oru ndi mmadu di mkpa maka mgbanwe mba - Audu Ogbeh
Minista oru ugbo, Chief Audu Ogbeh, kwuru, mba a choro ndi oru aka oru maka mgbanwe nke oru ugbo n'uwa.
Oyo CP Abiodun Odude kwusiri igba ndi ulo oru nzuko nke Ibadan
Kọmitii nke ndị uweojii nke Oyo, Mr. Abiodun Odude, kwuru na ndị ikom ya enweghị ọrụ maka ịchụ ụmụ nwanyị abụọ nke ndị ọrụ nke Institute of Agricultural Research and Training (IAR & T), Ibadan.
Ọtụtụ ndị merụrụ ahụ dị ka ndị uweojii, ụmụ akwụkwọ, nsogbu na Oyo
Ndi Komenti Oyo, bu Abiodun Odude, kwuru na ndi mmadu anọ kwenyere na ulo ogwu mgbe ha meriri nsogbu n'etiti ndi uweojii na umu akwukwo nke Federal College of Agriculture, Moor Plantation, Apata, Ibadan, na Monday.
Ndị uweojii anọ nwere ụlọ ọgwụ mgbe nsogbu na ụmụ akwụkwọ nọ na Ibadan
Okenye ndị uweojii nke Oyo, bụ Abiodun Odude, kwuru na ndị uweojii anọ nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe ha merụsịrị mmeri ha n'oge nsogbu na ụmụ akwụkwọ nke Federal College of Agriculture, Moor Plantation, Apata, Ibadan, Oyo State na Monday.
Ụbọchị Nri Ụwa: Ndị ọkachamara na-atụ aro nyocha ọrụ oru ugbo
Ka Ụwa na-eme ụbọchị 2017 World Food Day, ndị ọkachamara ekwuola na mmezi ngwa ngwa nke ọrụ ugbo Naijiria iji mee ka mmepụta ihe oriri na mmepe imepewanye aka.
Odafe Atogun nke ode akwukwo nke Abuja agbaala ndị nne na nna ume ka ha kwado ụmụ ha maka ọrụ ha iji mee ka ha nweta ihe ịga nke ọma.
Ndi mmadu a choro na ha bu ndi oru ugbo, n'oge oputara abali nke Thursday abata otu ulo uka di na Obodo Obodo Obodo Obodo Obodo Benue ma gbuo mmadu asaa.
Ma ọ dịkarịa ala ụmụ ụmụaka 13 gburu na ise na-emerụ ahụ ụfụ ụtụtụ Thursday mgbe a kwaturu ụgbọ okporo ígwè n'ime obere ụgbọ ala dị n'ebe ugwu India, otu ...
Onye isi nyocha nke ndị uweojii (IGP), Ibrahim Idris, na Thursday, zere ọkpụkpọ òkù a gwara ya ka ọ bịa n'ihu Senate banyere njide na njide nke Sen. Dino Melaye, na igbu ọchụ na Nigeria.
Nwoke 20 na-ezu ohi na ekwentị iji kwụọ ụgwọ WASC
Otu nwoke 20, James Egbe, na Thursday, gwara ụlọikpe Kubwa Grade 1 nke dị na ya na ya zuru ekwentị iji kwụọ ụgwọ maka akwụkwọ nyocha nke akwụkwọ West African School (WASC).
Official: US iji zipu 12 ụgbọelu agha Nigeria na 2020
United States na-ekwu na ọ ga-esi na 2020 zọpụta ọdụ ụgbọ mmiri 12 Super Tucano na ngwá agha ndị ọzọ ọ kwadoro ree na Nigeria iji lụso ndị agha Boko Haram na ndị ọzọ na-eme mgbaasị ọgụ.
Obodo Bayelsa na-eyi egwu mmebi nke mmanụ
Ndị bi na Nembe ma kwado OPL 29 na Nembe Obodo Gọọmenti nke Bayelsa State ekwuola na ọ ga-eme ka AITEO Eastern E & P mebie mmanụ site na ọ naghị arụ ọrụ ya kemgbe ọ natara mmanụ ahụ afọ anọ gara aga.
INEC na-edezi 125,481 ndị nhoputa ndi nrite na Edo
Ụlọ akwụkwọ Nọọmenti Independent National Electoral Commission (INEC) kwuru na ọ debanyere ndị nhoputa aka ntinye aka 125,481 na njedebe nke atọ nke atọ nke 2017 na nkeji iri na anọ nke 2018 Nọgide na-ede Voter Registration (CVR) na Edo.
CCPP: Ndị nnọchiteanya nke mba ndị omeiwu, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị elu n'azụ nwanyị weghaara
Nzukọ nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-echegbu onwe ha (CCPP), n'ehihie Fraịdee, meghachiri ka e wepụ nwanyị site na Senate, na-ekwu na mmepe ahụ bụ nkọcha mba na ezi uche.
NBS: Ụlọ akụ na-akwụghachi N654.49 nde ụgwọ ebubo na akaụntụ gọọmentị
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nyocha nke Nigeria (NBS) kwuru na ụlọ akụ ejirila N654.49 nde ụgwọ ndị ọzọ a kwụrụ ụgwọ si na akaụntụ ụlọ akụ gọọmenti metụtara akaụntụ ejikọta.